Waare;”Farmaajo waxa uu iclaamiyay Dagaal Qabiil ayuu iclaamiyay” – Bulsho News
Waare;”Farmaajo waxa uu iclaamiyay Dagaal Qabiil ayuu iclaamiyay”
Madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku eedeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu iclaamiyay dagaal qabiil waxana uu ka digey in dalka Soomaaliyeed markale uu galo burbur iyo dagaal sokeeye.
Maxamed Cabdi Waare madaxweynihii hore ee Hirshabelle oo ka hadlay taleefishinka UNIVERSAL ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha muddo xilleedkiisu dhamaaday in ciidamo aan sharci ahayn oo qaab dowladnimo soo marin geeyay magaalada Beledweyne.
“Farmaajo firimbi dagaal qabiil ayuu iclaamiyay war ninkaas ninka qabashadiisa lahow qabta, farmaajo qabsoomi maayee Biixi ninka qabashadiisa lahow qabo, dagaal qabiil laguma kala faa’ideyo soomaali weyney jid qabiil ayaa la qaaday ninka laxajeclo dalka uga jirto arrinta labo qabiil oo la isku fiirsado waa dhaaftayee arrinta ha la soo farogeliyo.”ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare.
Waare ayaa ku tilmaamay siyaasada Farmaajo shanti sano ee la soo dhaafay mid ku jiheysneyd in uu la la dagaalamo maamul goboleedyada meeshii uu kala dagaalami lahaa Shabaab,wadankana uu ka dhigo meel uu isagu haysto iyo meel Alshabaab ay haystaan.
“Farmaajo waxa uu heshiis la galay siyaasadiisa ku habeeyay in isaga iyo shabaab wada noolaadaan,shabaab cadowgiisana la dagaalamo waxa uu la dagaalamay Ahlu suna iyo Maamulka Jubba,shabaabna kama abaal dhicinee waxa ay dileen cid kasta oo Farmaajo ka soo horjeeda shabaab aa shan sano kadib beledweyne laga raadinaa cid loo sheegaayo oo caqli leh ma jirto.”ayuu yiri Waare.
Madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu ka shaqeynayay in uusan tegin Cali Guudlaawe Madaxweynaha Hirshabelle magaalada Beledweyne isla markaana dadaal walba oo laga sameeyay arintaasna uu carqaladeynayay isagoo adeegsanaya Madaxeynaha ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabaged.
Waxa uu Waare ugu baaqay Madaxeynaha Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen inuu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan geynta ciidamada magaalada Beledeyne.
“Madaxweynow nin oday ayaa tahay nin akhlaaq leh ayaa tahay, meel xun ayaa lagu geliyay, Madaxweynow”Cali Guudlaawe”meesha waxa ka dhacay inaadan raali ka ahayn sheeg farmaajo iyo reer Hiiraan isaga dhex bax, meeshaadaa lagugu imaan doonaa, inaad Madaxweynaha Hirshabelle tahay cid diidan ma jirto.”ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare.
Waare ayaa sheegay in dowlada Turkiga oo tababartay ciidamada Gorgor ay dacwad u gudbin doonaan ayna ka dalban doonaan in dib u qiimeyn ku sameeyaan siyaasada amniga xiriirka Soomaaliya la leedahay,
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka inay u aqoonsato qaswadaha wadanka dhibaatada ku haya.
“Golaha Ammaanka waxa aan u gudbin doonaa ciidamada aan sharciga ku dhisneyn gabood falada ay kula kacaan shacabka.”ayuu hadalkiisa sii raaciyay Maxamed Cabdi Waare.
Sidoo kale, Maxamed Cabdi Waare ayaa ra’iisul wasaaraha xukuumada federalka Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay in taliyaashii geeyay ciidamada magaalada Beledweyne iyagoo aan amar ka qabin dowlada uu tallaabo ka qaado.
Waxaa soo kordhaya xiisada ka dhalatay ciidamo shalay lagu geeyay diyaarado magaalada Beledweyne waxana uu ra’iisul wasaare Rooble magacaabay guddi ka shaqeeya sidii dib loogu soo celin lahaa ciidamadaas magaalada Muqdisho.